Amai Mujuru vanoti kubva zvavakanyorerana chibvumirano chekuuumba hwaro hwekushanda vose neVaTsvangirai che Memorandum of Understanding kana kuti MOU vachine chinangwa chekushanda vose.
Vati nyaya yekuti vainge vasiri kuZimbabwe Grounds, Highfield pakanyoreranwa chibvumirano chemushandirapamwe nemapato manomwe achiumba MDC Alliance hazvirevi kuti nhaurirano dzakundikana. Vanoti vari kuita pota neko tisangane neMDC.
Amai Mujuru vati zviri pachena kuti kana pasina kubatana kukunda musarudzo zvichanetsa. Sarudzo dzemutungamiri wenyika dziri kuitwagore rinouya uye Zanu-PF yakatosarudza mutungamiri wenyika VaRobert Mugabe kuti vatungamire bato iri.